कुखुराको मासु साेचेभन्दा सस्ताे, कति हाेला अनुमान गर्नुहाेस् त ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कुखुराको मासु साेचेभन्दा सस्ताे, कति हाेला अनुमान गर्नुहाेस् त ?
चितवन- तीन हप्तादेखि जारी निषेधाज्ञाले फार्ममा तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा बजारसम्म नपुग्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको छ। पोल्ट्री राजधानीका रुपमा परिचित चितवनबाट बाहिरी जिल्लासम्म कुखुरा निर्यात गर्न नसक्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको हो।
एक हप्ताअघि प्रतिकेजी खुद्रा ४२० रुपैयाँ रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले २०० रुपैयाँमा झरेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि यतिखेर ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण जिल्लाका मासु पसलहरु केही घण्टामात्र खुल्ने गरेका छन्।
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका कार्यकारी अधिकृत शिवप्रसाद बरालले पोल्ट्री व्यवसाय अति संवेदनशील क्षेत्र भएकाले निर्वाधरुपमा सञ्चालन नहुँदा कृषक प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए। ु४५ दिनभन्दा बढी कुखुरा पाल्दा उत्पादन लागत पनि उठ्दैनु, उनले भने, ‘कुखुरा र तरकारी एउटै जस्तै हो। लामो समयसम्म भण्डार गरेर राख्न मिल्दैन। अहिले मासु खपत हुने ठाँउ बन्द जस्तै छ।’
‘केपी बालाई काम गर्न दिनुपर्‍यो’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन